WAA MAXAY GURIGA LOOLA JEEDO: SIDA LOO SAMEEYO HOYGA ADOO ISTICMAALAYA GACMAHAAGA. - INFRASTRUCTURE
Waa maxay idaha
Qalabka beeraha, oo loogu talagalay deegaannada idaha, labadaba jiilaalka iyo lambarkooda, waxaa lagu magacaabaa sheepfold. Muuqaalka muuqaalka dhismaha waa dhererkiisa (1-1.2 m) iyo tiro daaqado badan. Sheepfolds waxaa lagu dhisay qaabab kala duwan - qaab ah leydiin, warqad "G" ama "P". Dhismaha dhismaha wuxuu u jeestay koonfurta, halkaas oo saldhigyada quudinta maalinlaha ah ay qalabaysan yihiin, derbigu wuxuu u jeedaa woqooyiga waxaa lagu dhistaa iyada oo aan lahayn furfurnaan. Qalabkani wuxuu ilaaliyaa dabaylaha qabowga.
Ka fiiri noocyada caanaha sida caanka ah sida "Edilbaevskaya", "Romanovskaya", "Tonkorunnaya" iyo "Romney-March".
Waxaa jira shuruudo badan oo la xidhiidha dhismaha la xidhiidha waxyaabaha gaarka ah ee sii kordhaya nooca xoolaha ee kor ku xusan. Inaad barato qaar ka mid ah shucuurta loo baahan yahay natiijada guuleysta ee dhacdada qorshaysan waxay kaa badbaadin doontaa wakhti, lacag, oo sharxi sida loo sameeyo xayawaankaaga keligiis.
Xayawaanku waa xoolo xayawaan leh, laakiin ma jecla inay ku badan yihiin, iyaga oo rajeynaya mugga wadarta qolka in la dhigo mid ka mid ah ilmo-galeenka oo leh qashin ah ugu yaraan 3 mitir oo laba jibbaaran. meel. Tani waxay si toos ah ugu xiran tahay tayada dhogorta.
Ma taqaanaa? Dalka Ukraine (gobolka Kherson) ayaa diiwaanka lagu diiwaangeliyay tirada tirada dhogor cad oo laga helay hal wan. Waxay u egtahay in uu yahay nin miisaankiisu yahay 130 kg, kaas oo 31.7 kg oo ah dhogor sanadkiiba la gooyay.
Ma u dulqaadanayaan isbedelka heerkulka, qufaca iyo jirradan cudurada sanbabada, sidaa daraadeed, qalinka ariga waa inaanu ahayn mid weyn oo keliya, laakiin sidoo kale diirimaad, iyada oo aan jirin wax qorshe ah.
Maqnaanshaha qoyaan sare - waa shardi u ah dhismaha. Qoyaanka xad-dhaafka ahi waxay keenaan dhalmada fangaska ee jaakadda iyo muuqaalka cudurrada maqaarka. Tan waxaa lagu gaari karaa iyada oo lagu rakibayo hab hawo wanaagsan.
Joogitaanka dabaq adag oo adag. Xayawaanku waxay u nugul yahiin cudurka lugta, sidaa darteed, adoo buuxinaya shuruudaha lagu daboolayo dabaqa, waxaad siin doontaa iyaga oo leh isugeyn caafimaad qaba.
Aad bay muhiim u tahay inaad doorato meel aad ku dhisto. Tani waxay inta badan ku xiran tahay haddii horumariye uu gaari karo xuduudaha loo baahan yahay:
aagga waa in uu qalalo;
leeyihiin heer hoose oo ah dhulka dhulka, dhulka adag;
joogitaanka xayndaab - ugu yaraan 5 cm 1 mitir, si looga saaro biyaha duufaanka;
jilicsan - jidadka fudud ee la heli karo, helitaanka biyaha iyo korontada.
Ogow waxa shuruudaha ugu muhiimsan marka aad dooranaysid mashiinka loogu talagalay idaha.
Ka dib markii la qorayo mashruuca, waxaad u baahan tahay inaad qorto liiska waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Tani waa kharashka ugu qaalisan ee kharashka marka la abuurayo ido ido u ah ido. Si aad u dhisto gacmahaaga waxay ahayd miisaaniyad, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto wax walba horey u sii socoshada oo aanad lacag u isticmaalin dheeri.
Badanaa waxaa badanaa lagu dhisi karaa dhismaha noocaas oo kale ah lebbiska ama qoryaha. Iyada oo ku xiran aagagga deganaanshaha waxaa laga dhisi karaa dhoobo cagaha ama sanduuqyada.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, qalin ayaa laga sameeyay dhagax. Xayawaanku waxay ku kala duwan yihiin xoogga la yaabka leh, gaar ahaan raga, waxayna si fudud u burburiyaan dhismayaasha jilicsan.
Ka fikir maaddooyinka lagama maarmaanka u ah noocyada ugu caansan dhismooyinka, kuwaas oo ah nooca qoryaha ama lebbiska. Xaaladda kowaad, waxaad u baahan doontaa qalabka wax lagu sameeyo walaxda:
qorsheeyaha iyo jigsaw,
sawir wareeg ah,
tuunboolaha iyo nalka
jilbaha, ciddiyaha, qiyaasta cajalad,
Si loo hirgaliyo ikhtiyaarka labaad ayaa loo baahan doonaa:
xeeladaha loogu talagalay diyaarinta xalka
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo maaddada loogu talagalay qurxinta gudaha:
Dhismaha paddock wuxuu ku dhacaa dhowr tallaabo oo sahlan, mid kasta oo ka mid ah waxa uu leeyahay nuucyadiisa gaarka ah.
Foundation Xoogga iyo adkaysiga qaabdhismeedka, waxaanu bilownaa geeddi-socodka aasaasidda aasaaska qaab-dhismeedyada la taaban karo. Ku shub xalalka la taaban karo ee ku hareereysan dhismaha alwaaxa, ka hor inta aan la jiidin god qodid ah. Isla mar ahaantaana waxaan ku dhejineynaa birta birta ee tiir kasta, oo ay dabooli doonto mustaqbalka.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh si loo barto sida kor loogu qaado lambarada agoonta.
Frame Waxaan lakabeynay lakabka biyaha aan saldhig u aheyn saldhigga, ka dibna ka samee sheyga boorarka lagu rakibay.
Dhagaxyada, daaqadaha iyo albaabada Marxaladda xigta waa dhismaha derbiyada - lebbaal ayaa la dhigayaa ama qoryaha alwaaxa ayaa lagu tooganayaa cirbadaha taageeraya (marka laga hadlayo derbiyada alwaaxda), kaas oo lagu daboolay boards ka baxsan dibadda.
Waa muhiim! Markaad isticmaasho wax kasta, waa in laga saaraa gudaha. Macdanta macdanta ayaa u habboon tan.
Xeryaha idaha, heerkulka qaboobaha waa inuusan hoos u dhicin +3 ° C, iyo inta lagu jiro wanaajinta - ka hooseeya +8 ° C. Ha ilaawin daaqadaha daaqadda, waxaa lagu dhejiyaa dhererka 1.5 mitir dhulka oo ku filan iftiinka wanaagsan ee wakhti kasta maalintii, haddii kale waa inaad ka taxadartaa ilaha iftiinka dheeriga ah. Windows wuxuu noqon karaa mid sir ah ama si fudud u duuban filimka. Doorashada labaad ayaa loo adeegsadaa maqnaanshaha hawo dabiiciga ah oo loogu talagalay beddelidda hawada. Laakiin taasi waxay muhiim u tahay inaysan dhaafin oo furin furitaanka si aanay jirin wax qabyo ah. Gidaarrada ku jira duubka ayaa laba jibbaaraya si loo kordhiyo awoodda. Albaabka ayaa ah qaybta ugu diyaarsan ee dhismaha, waxaa laga sameeyaa qoryo adag, albaabbada albaabka tayo sare leh ayaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo. Way ka fiican tahay inaad ka baxdo dhulka hoostiisa, ka buuxi dhoobada ama mid isku darka ah - ku shub hubi, oo qoryo kor saar.
Waa muhiim! Markaad sameysid dabaq alwaax ah, waxaa la sameeyaa dhowr santimitir oo ka sareeya xagasha yar. Tani waxay gacan ka geysataa sii deyn degdeg ah oo qashinka ah iyo dheecaankiisa.
Root Laga soo bilaabo korka derbiyada waxaa lagu daboolaa saqafyada isgoyska kaas oo salka uu ku faafayo. Waxaa lagugula talinayaa inaad diiriso saqafka (fursadda ugu fiican waxay noqon kartaa hay) si loo yareeyo kulaylka.
Sida loo qalabeeyo qalinka loogu talagalay idaha
Ka dib marka la gooyo cawska, waa lagama maarmaan in la diyaariyo meel gudaha ah oo loogu talagalay joogitaanka raaxada ah ee idaha ku jira mudada taagan. Halkan, sidoo kale, badi shaqada ayaa la samayn karaa by gacanta:
tiro ku filan oo quudiya iyo cabitaanada waa in lagu rakibo idaha. Dhaqdhaqaaqa quudinta waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la tixgelinayo baahida quudinta loo baahan yahay oo u dhiganta 300-400 mm oo keliya hal ilax;
dhismayaasha waa in loo qaybiyaa aagag sida ku saleysan da'da, jinsiga xoolaha iyo jinsiyada la heli karo. Maadaama maaddada kala soocista ay isticmaalaan shukumaan caadi ah ilaa 1 mitir;
Waa muhiim! Goynta qoorta ee xayawaanka waxaa lagu sameeyaa qashin gaar ah. Waa in lagu sameeyaa meel gabi ahaanba xiran si looga fogaado qaymaha dhogorta iyo wasakheynta boodhka.
Xayawaanku wuxuu udub dhexaad u yahay qoyaan, sidaas darteed, hawo wanaagsan ayaa ah baahi degdeg ah, si kastaba ha ahaatee, daboolka daboolka leh lakabka caws isku qasan leh sida balka, waxaan qayb ahaan ka bixinnaa qoyaanka ka soo socda dhulka.
Iyada oo wax ka qabatay nuxurkii dhismaha xayawaanka, dooro qalabkaas oo ilaalin doona adhiga, kordhinta faraca, ka ilaali qabow, fungus iyo cudurrada kuwaas oo xaqiijin doona baraarugaaga ganacsiga xoolahaaga sanado badan.